Ski mwaka unopedzisa kutanga kweAustria neSvondo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Ski mwaka unopedzisa kutanga kweAustria neSvondo
Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Skiing muAustria inonakidza kwazvo, uye kunakidzwa kuchapera nekukurumidza apo vese vanokwidza ski vachamira kushanda kupera kweSvondo, uye mahotera munzvimbo yeAustria ski inoda vashanyi kuti vatarise neMuvhuro wapfuura, Kurume 16.
Icho chikonzero chiri Coronavirus. Austria, uye kunyanya inozivikanwa uye yakanaka Tyrol nzvimbo inogovera muganho neItari. South Tyrol, icho zvakare chiri kutaura chiGerman chiri chaizvo Italy uye yakatovharwa kubva kune dzimwe nyika mushure mekunge Italy yaraira munhu wese kuti aone kukiya kwenyika.
Austria ine 361 yakazivisa zviitiko zveCVV-19 hutachiona uye kufa kumwe chete kusvika parizvino. Yakavakidzana Italy ine 15113 makesi ane 1016 vanhu vakafa, Germany kuSouth yeAustria uye zvakare inozivikanwa ski matunhu ine 2745 kesi ne6 vakafa. Muvakidzani weSwitzerland une makesi mazana masere nesere ane makumi manomwe neshanu, uye kunyange diki reLiechtenstein rakaiswa pakati peAustria neSwitzerland ikozvino rave nemoyo murefu 868 uye hapana mhaka dzinouraya.
Austria yakanga yatora danho rinoshamisa mukuvhara muganho kuenda kuItari isingabvumidze maItaly kupinda munyika. Ose maAustria neItari inhengo yenharaunda isina Schengen yemuganhu. Coronavirus ikozvino yakaparadza kurota kweEurope pasina miganhu.